CALEENTA BARADHADA "KARATOP": SHARAX, SAWIR, SHARAXAAD, FAA'IIDOOYIN IYO FAA'IIDO DARO - BEER CAGAARAN
Kala duwanaanshaha baradho Jarmalka: "Karatop" sharaxaad, sawir, astaamaha ugu muhiimsan
Kalluumeeyayaasha adduunka oo dhan waxay sii wadaan inay isku dayaan in ay abuuraan noocyada ku habboon ee khudradda, iyo baradhadu ma aha mid ka reeban.
Dhawaan dhowaan, rabitaankani waxa uu ku dhawaad ​​ku guulaystay guusha, taas oo sababtay kala duwanaanshaha Karatop soo muuqday. Miro, dhadhan wanaagsan, awood u leh inay koraan carrada iyo horayba u bislaaday - maxaa ka fiicnaan kara?
Laga soo bilaabo maqaalkan waxaad baran doontaa wax kasta oo ku saabsan kala duwan ee baradho karatop, sharaxaadiisa, astaamaha, astaamaha beerashada.
Caleenta baradhada "Karatop", sifooyinka
Magaca dugsiga Karatop
Sifooyinka guud hore, kala duwan oo wax soo saar leh leh digriiga yaryar, ma ka cabsanaya gaadiidka, adkaysiga dhaawaca farsamada
Wakhtiga uurka 40-55 maalmood
Mawduucyada Starching 11-15%
Dad badan oo digriiga ganacsiga ah 60-100 gr
Tirada digriiga duurka 16-25
Yield ilaa 500 kg / ha
Tayada macaamilka dhadhan wanaagsan, kuma dhici karto, ku habboon bataashka iyo baradho la shiiday
Gobollada la doorbido Waqooyi-Galbeed, Volga Dhexe, Ural, Ruushka dhexe
Cadaadiska cudurada wax yar u adkaysta dabaylo goor dambe
Noocyada sii kordhaya waxaa laga yaabaa in koray filimka, ma ka cabsanaya ciid adag, jecel yahay waraabinta
Asalka NORIKA KORDHO KARTOFFELZUCHT UND VERMEHRUNGS GMBH (Jarmalka)
Waxaa ka soo jeeda jarmalka oo ku yaal Jarmalka, waxaana lagu daray diiwaanka Gobolka Ruushka ee Horumarinta Abaarta sanadkii 2000 (gobolka Waqooyi-Galbeed iyo Dhexe). Ujirta noocyada hore ee baradho ah, beergooyska ayaa noqon kara horey u soo qaadatay maalintii 50 ka dib markaad degto.
Karatop waxay ku faanaysaa dhalid aad u sarreeya: 18.5 - 27 t / ha gobolka dhexe ee Dhexe, 20 - 43.5 t / ha gobolka waqooyi-galbeed. Cuntada ugu sarreysa waa qiyaastii 50 t / ha.
Qaabka digriiga ee Karatop waa mid aad u sarreeya oo leh jahwareer yar. Waxay leeyihiin muuqaal la yaab leh oo la iibsado oo leh jilic jilac jilicsan oo maqaarka ah iyo iftiin huruud ah oo buluug ah. Dusha sare ee miro badanaa waa siman oo siman, sidaas darteed baradhadu waxay ku fiican yihiin nadiifinta farsamada.
Indhuhu waa yar yihiin, oo leh heer aad u sarreeya oo dhaca. Qodobka xawaareynta heerkulkiisu yahay 10.5 - 15%. Miisaanka badeecadda ee hal dabeere ah waa qiyaastii 58 - 100 g. Baradhada noocaan ah waxay leeyihiin dhadhan wanaagsan, tayada haynta iyo suuqgeynta waxtarka leh ee 72 - 93%.
Jadwalka hoose ee isbarbardhigga macluumaadka ku saabsan soo saarista noocyo kale oo baradho ah:
Lilea ilaa 670 c / ha
Haween Maraykan ah 250-420 c / ha
Handsome 170-280 kg / ha
Ladoshka ilaa 450 kg / ha
Tafsiir 400-450 c / ha
Jelly ilaa 550 kg / ha
Eeg hoosta: Kaararka karatop kala duwan, sawir
Buundooyinka ayaa si dhakhso ah u kobciya waxayna leeyihiin dhalooyin awood leh, waxay u koraan cabbir dhexdhexaad ah. Inta lagu jiro ubax waxay sameeyaan qadar yar oo ubax cad. Burburka laftiisa waa mid qumman oo toosan, nooca stem. Heerkuna wuxuu leeyahay midab yar ama midab lahayn anthocyanin. Caleemaha waa mid dhexdhexaad ah, oo ah nooca dhexdhexaad ah, waxay ku kala duwan yihiin muuqaal yar oo qallafsan.
Kala duwanaanshahan waa mid cajiib ah ku habboon beeritaanka nooc kasta oo ciid ah. Waxyaabaha laga reebo waa carradu ay ku jiraan tiro badan oo farsamooyin farsamo, deegaankooda wuxuu u baahan doonaa nafaqo iyo daryeel dheeraad ah.
Dhibatadu waa ku tiirsanaan ku xiran biyaha. Sidaa darteed, haddii aad rabto in aad hesho goosashada weyn iyo goor hore, ka dibna rakibidda nidaamka waraabka si toos ah noqon doonaa xal fiican.
Sababtoo ah sifooyinka midhihiisa ayaa ah mid ku haboon inuu guriga ku karsado, iyo inuu sii kordhiyo ujeedooyinka warshadaha. Iyada oo hoos imanaysa saamaynta daaweynta kulaylka, waxay si fiican u karisaa oo ma lumiso midabka wanaagsan. Karatop waa mid aan fiicneyn oo keliya in la sameeyo baradhada caadiga ah ee la shiiday, laakiin sidoo kale wax soo saarka cagaarsho, iyo xittaa barafka.
Ka hor inta beerto, si natiijada ugu wanaagsan ee dhalidda, waxaa lagu talinayaa in si taxadar leh u xulato wax beerto. (Waxaa lagama maarmaan ah in la doorto oo kaliya digriiga ugu weyn iyada oo aan wax khasaare ah lahayn). Sidoo kale, marka hore geedka waxaa ugu wanaagsan koray dheriga peat.
Marka laga beero qalabka ciidda, digriiga ee noocyo hore u bislaaday ayaa si fiican loo dhigayaa meel u dhow midba midka kale. Wixii bacarimiso Karatop waa in ay isticmaalaan Bacriminta kuwa si wanaagsan oo dhakhso ah u dheefay.
Sababta tani waa in dhammaan noocyo baradho ah oo hore u bislaaday nafaqooyinka si ka dhaqsiyo badan walaalaha ah Bisaylkiisa soo daahay.
Ku saabsan sida iyo goorta la dalbado bacrimin, iyo sidoo kale haddii ay tahay in la sameeyo inta lagu guda jiro beeritaanka, eeg maqaallada shay ee goobta.
MUHIIM! Inta lagu jiro xilliga Bisaylkiisa, dhirtaada waxay shaqeyn doontaa macdano caafimaad leh xawaare laba jeer ah, sidaas darteed waqtigan waxay u baahan doontaa waraabin dheeri ah iyo daryeel.
Karatop waa mid ka mid ah noocyada ugu dambeeyay oo ay soo jiidatay Faa'iido Jarmal ah. Horumariyey aagagga cimilada, oo inta badan ku koray dhulka Ruushka, Moldova iyo Ukraine.
Tilmaamaha ugu muhiimsan ee kala duwanaanta waa:
Daahfurka. Kala duwan waxaa loo tixgeliyaa Bisaylkiisa hore, xilliga daaqsinka oo ah 60-65 maalmood. Laakiin, maalinta 50aad ka dib markii laga beerto, waxaad bilaabi kartaa goosashada.
Yield. Karatop waxay bixisaa cajiinka cajiibka ah, taas oo, qashinka ugu horeeya (45 maalmood ka dib marka la beerto), waa 35 tan oo laga bilaabo 1 hektar, iyo dhammaadka xilliga Bisaylku wuxuu gaari karaa 50-52 tan.
Dulqaadkii abaaraha. Karatop baradho ayaa waxyeello u geysataa abaarta. Maqnaanshaha warshadaha dabiiciga ah ama dabiiciga ah, digriiga waxaa la sameeyaa si tartiib tartiib ah, tayada dalagga dhamaadka xilli sii kordhaya ayaa yareysa.
Neefsashada dhulka. Karatop waxay dareemeysaa mid aad u wanaagsan dhammaan noocyada carrada. Hase yeeshee, carrada culus ee culus ayaa u baahan daryeel iyo nafaqo dheeraad ah.
Codsiga. Shaxda kala duwan ee baradhada, ayaa loo isticmaalaa guriga iyo warshadaha. Si wacan u wareejinta kaydinta dheer, tayada haynta ayaa ka dhigaysa 97%. Habboon ee biqilka iyo beerista hoos filimka.
Dhadhami. Dhadhanka baradho karatop waxaa lagu qiyaasay 4.7 dhibcood shan dhibcood. Inta lagu jiro daaweynta kuleylka, waxaa si fiican loo kariyey jilicsan, oo ku habboon samaynta baradho la shiiday, chips, iyo sidoo kale in lagu keydiyo.
Cadaadis fayoobi ah. Dhibaatada farsamada Karatop waxay si fiican u dulqaadataa, waxyeello aad u yar.
Cadaadiska cudurada. Karatop kala duwan ayaa caan ku ah ciladaheeda iyo cayayaanka sida cayayaanka A iyo Y, kansarka baradhada, nematode, qanjirada, glandular goor dambe. Si aad u daahdo ah ee digriiga diidmo daciif ah ayaa la xusay.
Si loo barbardhigo sifooyinka Karatop leh noocyo kale oo baradho ah, fiiri jadwalka hoos ku xusan:
Magaca dugsiga Mawduucyada Starching Soo kabashada
Furan 14-16% 95%
Rabo 13-21% 95%
Nevsky 10-12% wanaagsan, laakiin digriiga horey u jaraan
Taisiya 13-16% 96% (digriiga waxay leeyihiin nasasho dheer)
Rodrigo 12-15% 95% (ma ahan mid macquul ah in lagu keydiyo)
Sida kaydinta baradho, wuxuu u baahan yahay inuu raaco oo kaliya dhowr xeer oo fudud. Waxaan kuu diyaarsaneynay waxyaabo faahfaahsan oo ku saabsan nolosha shelf, doorashada saxda ah ee goobta iyo xaaladaha kaydinta xilliga qaboobaha.
Guud ahaan, Karatop waxay leedahay hab difaaca oo fiican oo ka ilaalisa cudurrada iyo cayayaanka badankood, tusaale ahaan: Diidmada sare ee fayrasyada Y iyo A, Daahfurka goor dambe ee digriiga, qanjirada glandular, qolofka, lugta madow, verticellosis, Alternaria iyo kuwo kale.
Kaliya marka laga reebo waa cilad-darro daboolka dushooda, taas oo Karatop uu leeyahay caabuq aan fiicnayn.
Sidaa daraadeed, tallaabooyinka badbaadada ee kahortaga, marka burooyinku ay muuqdaan, duurkaaga waa in lagu buufiyaa fangasidyada xiriiriya nidaamka.
DAREEN! Sidoo kale, faleebo toon ah iyo kaneecada kaneecada waxay noqon doontaa tallaabo wanaagsan oo ka hortag ah.
Waxaad arki kartaa fursadaha lagu xakameynayo gaboobada dambe ee fiidiyowga:
Beeraha beeraha ee baradho waa wax aan gaar aheyn, waana mid caadi ah. Si aad u hesho goosashada wanaagsan waa inaadan dayacin waraabka dheeraadka ah iyo mulching ee ciidda.
Sidoo kale, waxaad noqon kartaa macluumaad faa'iido leh oo ku saabsan hababka kale ee beerashada: tusaale ahaan, ku saabsan tiknoolajiyada Dutch, oo ku saabsan sii kordhaya foostooyinka iyo bacaha.
Isticmaalka kiimikooyinka kala duwan ee beerista baradho ayaa keena muran iyo muran.
Waxaanu kuu soo jeedinaynaa macluumaadka faa'iido leh ee ku saabsan sababta iyo sida cagaarshowga iyo cayayaanka loo isticmaalo beerashada baradhada.
Karatop waa noocyo baradhada guud ee loo isticmaalo ujeedooyin kala duwan. Dhamaan faa'iidooyinka ay leedahay, waxay leedahay labo kaliya oo yar yar oo khatar ah: dalbashada waraabinta iyo ilaalinta liita oo hal cudur ah. Sidaa darteed, haddii aad wali ka fekereyso nooca baradho ah ee lagu beerayo sanadkaan, markaa noocyada noocaas ah waxay noqon kartaa ikhtiyaarka ugu fiican ee adiga.